မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း “(ရှေးရှေးက မန္တလေးအပိုင်း 7) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း “(ရှေးရှေးက မန္တလေးအပိုင်း 7)
မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း “(ရှေးရှေးက မန္တလေးအပိုင်း 7)
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Oct 4, 2010 in Drama, Essays.. | 12 comments
မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း “(ရှေးရှေးက မန္တလေးအပိုင်း7)
ဒီမင်္ဂလာတံတား ဆိုတာက နန်းတွင်းကနေထွက်ရင်တောင်ဘက်အရပ်မှာရှိတဲ့တံခါးပေါက်ပေ့ါ၊
(73)လမ်းမကြီးရဲ့အဆုံးကတော့ အရင်က မန်းလေးမြို့ နဲ့အထက်မြန်မာပြည်က ကျောင်းသားများ အတွက်တစ်ခုတည်းသော အဆင့်မြင့်ပညာရင်နို့သောက်စို့ရတဲ့ (M.A.S.U)(မာဇူး)လို့အတိုကောက်တဲ့
မင်္ဂလာတံတားကထွက်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်း မှာတော့ ကျုံးနဲ့မြို့ရိုးကြားကမြေကွက်လပ်ကတော့ ဘာမှမရှိပါ။
တစ်ခါတစ်ရံစစ်တပ်က အစောင့်တပ်သားလေးတွေက အသီးအနှံစိုက်ခင်းလေးတွေလုပ်ထားတာဘဲရှိတတ်ပါတယ်။
သူ့အနောက်ဘက်မှာတော့ လှပသော အေးချမ်းသောဆိုတဲ့ ၀ိသေသဂုဏ်ထူးတွေနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ဘူးတဲ့ နာမယ်ကျော်” မန်းသီတာဥယျာဉ်”ပါ။
နိုင်ငံခြားကအတိုင်း မြို့လယ်ခေါင်မှာ ရှိတဲ့ ပနုးဥယျာဉ်ကလေးပါ။
မြန်မာပြည်သိန်းတန် သီဆိုဘူးခဲ့တဲ့ “မန်းမြေမှာလေးနှစ်တာ”ဆိုတဲ့သီချင်းလေးမှာ
” မန်းသီတာ လူငယ်လူကြီးအလည်ရောက်လို့လာတာ “လို့ထည့်ပြီးသီဆိုဘူးပါတယ်။သူပြောတာ အမှန်ပါဘဲ။
ဒီမန်းသီတာဥယျာဉ်လေးရဲ့ဖွဲ့တည်ပုံလေးကိုပြောရမယ်ဆိုရင် အနံတိုတို အလျားရှည်ရှည် စတုယန်းပုံလေးပါ။
အနံကတော့ ကျုံးရေပြင်နဲ့ နန်းမြို့ရိုးကြားက ကွက်လပ်ကလေးပါ။ အလျားကတော့ အနောက်ဘက် (79)လမ်းက စပြီးအရှေ့ဘက် (73)လမ်းမင်္ဂလာတံတားမှာဆုံးတော့ မန်းလေးအခေါ်(6)ပြတိတိအရှေ့အနောက် ရှည်မျောမျောကြီးပေါ့။
79လမ်းက ကျနော်တို့မန်းလေးက ကုန်ရုံဘူတာလို့ခေါ်တဲ့ မီးရထားက ကုန်တွေတင်တဲ့ စခန်းနဲ့တည့်တည့် လောက်မှာ ကျုံးကိုဖြတ်ပြီးဆောက်ထားတဲ့ကျုံးကူးတံတားလေးရှိပါတယ်။
အဲဒီတံတားလေးနဲ့ယှဉ်ရက်ကတော့ ကုန်ရုံဘူတာရဲ့အရှေ့ဘက်မှာ ရှိတဲ့မီးရထားသံလမ်းလေးရှိပါတယ်။အဲဒီသံလမ်းလေးကတော့ မန်းလေးဘူတာကြီးကနေ မတ္တမြို့ကိုသွားတဲ့ရထားလမ်းလေးပါ။
သစ်သားတံတားကို ဆေးအဖြူလေးသုတ်ထားလို့ တံတားဖြူလို့ခေါ်တဲ့ တံတားလေးကလဲ ကျုံးရေပြင်ကို ဖြတ်လို့ရတယ်။
ငယ်ငယ်ကဆိုရင် တံတားဖြူလေးပေါ်ကို ဖြတ်ရင်း ကြည်လင်နေ့တဲ့ရေ ထဲကမှော်ပင်လေးတွေကြားမှာ သွားနေကြတဲ့ ငါးဖောင်ရိုးစိမ်းစိမ်းလေးတွေ ဗိုက်ဖောင်းဖောင်းနဲ့ငါးပူတင်းလေးတွေကိုလိုက်ကြည့်ကြ ရတာအမောပါ။
တံတားဖြူလေးက ထွက်လိုက်လို့ အရှေ့ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျုံးရေပြင်နဲ့နန်းမြို့ရိုးကြားမှာ မန်းသီတာဥယျာဉ်ရှိမယ်။
အနောက်တောင်ဒေါင့်မှာ မီးခိုးရောင် လေးငါးပေလောက်မြင့်တဲ့ အုတ်ခံသွတ်မိုးအဆောက်အဦးလေးရှိမယ်။
အဲဒီအဆောက်အဦးလေးကတော့ အရင်တုံးက တနင်္ဂနွေလိုနေ့မျုိးတွေမှာ တေးဂီတအဖွဲ့လေးတွေ လာပြီးဖျော်ဖြေတာကို တွေ့ရပါတယ်။
မှတ်မှတ်ရရပြောရရင် 1976ခုနှစ်လောက်ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ် နိုင်ငံခြားက “ဒရုအယ်လင်တန်”ဆိုတဲ့ဂျပ်ဇ်ဂီတအဖွဲ့လာဖျော်ဖြေသွားတာလေးကိုတော့ မှတ်မိနေပါတယ်။
ကျုံးရဲ့အရှေ့ဘက်ခြမ်းက ကွက်လပ်ကတော့ 26ဘီလမ်းကနေ 22စီလမ်းရောက်တဲ့အထိ အားကစားကွင်းတွေကိုဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရမှာပါ။
အဲဒီနေရာမှာ လက်ဝှေ့ပွဲတို့ ဂျုဒိုပြိုင်ပွဲတို့ ကျင်းပတဲ့ နံရံလေးဘက်ကာထားတဲ့ မိုးမလုံ လူမမြင် အားကစားကွင်းလေးတွေရှိတယ်။
နောက်ဘောလီဘောကွင်း ဘတ်စကက်ဘောကွင်း တင်းနစ်ကွင်း အစီအစဉ်အလိုက် တောင်ကနေမြောက်ဘက်ကို တန်းစီပြီး ရှိနေပါတယ်။
အဲဒီအားကစားကွင်းတွေမှာအရင်က တနင်္ဂနွေနေ့မှာဆိုရင် အင်္ဂလိပ်လက်ဝှေ့ မြန်မာလက်ဝှေ့ပွဲတွေ မကြာခဏကျင်းပပါတယ်။
အဲဒီအချိန်တုံးက ကျနော်က 25လမ်း 80-81 ကြား သူဌေးတန်းရပ်က ခုံတော်မင်းဝင်းမှာ အဖေ့ရဲ့အမေတို့နဲ့ အတူနေတဲ့အချိန်ပါ။
အဲဒီကျုံးဘက်ကနေ ၀င်းဦးသီချင်းတွေဖွင့်ထားပြီဆိုရင် အဲဒီနေ့ပွဲလက်ဝှေ့ပွဲရှိတာသေချာပါတယ်။
မှတ်မိနေ့တဲ့ သီချင်းစာသားလေးကတော့ “မြက်ခင်းပေါ်လှဲ တဲ့ကာ ဖူးလက်ပင်အသာတကြည် ၀ါသနာထုံသူတွေ တီးလုံးအရေးစိတ်ကူးယဉ်နေသည်……….ထိုအတွေးမရှိရှာ ရေးရေးတော့ သိပါသည်…………………လက်ညိုးလေးနဲ့ထိုးကာလျက်တော့ ပါးစပ်ထဲနို့ဆီ ချိုအီ ချိုအီ မြို့မလဲ ဂေါ်ဂေါ်ဂွီဂွီနားထဲမှာ အီချိုအီချိုအီ”ဆိုတဲ့ ၀င်းဦးက မြို့မအဖွဲ့ကို
(ကြုံတုန်းပြောရရင်တော့ မြန်မာလက်ဝှေ့ကို အခုထိ နှစ်သက်စွဲလမ်းတာ အဲဒီတုံးကရလာတဲ့ မျုိးစေ့လေးပါဘဲ။
ငါးတန်းကျောင်းသားဆိုတော့ အပေါက်စောင့်က အလကားပေးကြည့်ပါတယ်။
ပေးမ၀င်ဘူးဆိုရင်လဲ ကလေးတွေလက်ချင်းချိတ် လို့ ကျုံးရေတိမ်တိမ်လေးထဲကနေလမ်းလျှောက်လို့ ရေနစ်မှာကိုလဲတွေးပူမလို့မကြောက်ဘဲခိုးဝင်ကြတာပါ။
အဲဒီတုံးက မိုက်ခွက်ကြီးကိုကိုင်လို့ အသားညိုညိုနဲ့လူကြီးက ဟိုင်းရော ဟိုင်းရောလို့ အော်နေတာ ဘယ်သူမှန်းမသိပေမယ့်နောင်ကြီးလာမှာသိတာတော့
ငယ်ငယ်က ကျားဘငြိမ်းရေးခဲ့တဲ့ က မ္ဘာကျော်လက်သီးမဲကြီးများစာအုပ်ကိုဖတ်ခဲ့လို့အားကျလိုက်ရတာ လူကဖြင့် ပေါင်ခြောက်ဆယ်တောင်မပြည့်ဘူး။
အခုခေတ်လက်ဝှေ့ပွဲခွေတွေများကြည့်ရင် ဟိုက်ရောဟိုက်ရောအော်နေတဲ့အသံက ကျားဘညိမ်းလို အားရပါးရမရှိတာတော့အမှန်ပါဘဲ။
(အရင်ခေတ်က လက်ဝှေ့ထိုးတာ ခုခေတ်နဲ့ အချီသတ်မှတ်လို့ထိုးပုံလေးမှာ နည်းနည်းလေးတော့ကွာပါတယ်။
အခုခေတ်ကဆက်တိုက် လေးငါးချီမနားတမ်းထိုး ဘယ်သူမှ မလဲမကွဲရင် သရေပွဲပေါ့။
အရင်ခေတ်ကတော့ ပထမဆုံးအချီစလွှတ်ပြီးရင် စထိုးသုံးမိနစ်ပြည့်ရင်စင်အောက်ဆင်းပြီးခဏနား။
အဲ နောက်ဆုံးအချီတက်ရင်တော့ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အနိုင်အရှုံးမပေါ်မချင်းထိုးပေတော့ဘဲ။
ကြောက်ရှုံး ကွဲရှုံး အလဲရှုံးပါဘဲ။
အဲဒီနောက်ဆုံးအချီမှာ ပုဝါမကူ ရေမရှူကြေးတွေဘာတွေဖြစ်လာတာပါဘဲ။
အခုခေတ် ပုဝါမကူ ရေမရူကတော့ ပြောသာပြောတာ အာပလာလုပ်ကြတာပါ။
အမှတ်အရဆုံးပွဲကတော့ မန်းလေးလက်ဝှေ့ကျော် မြွေပွေးသိန်းမောင်နဲ့ စစ်ကိုင်းကျောင်းသားတို့ရဲ့ပွဲပါဘဲ။
အဲဒီတုန်းက စစ်ကိုင်းကျောင်းသားက လူငယ်လက်တက် မြွေပွေးသိန်းမောင် က အဝေးတစ်နေရာမှာ ခဏကွန်းခိုရာပြန်လာတဲ့ချိန်ပီယံဟောင်းပေါ့။
ပထမ ဒုတိယအချီကတော့ အပြန်အလှန် တခွပ်ခွပ်ဆော်ကြတာပေါ့။
နောက်ဆုံးအချီမှာ ရေကုန်ရေခန်း အရှုံးအနိုင်မပေါ်မချင်း အပြန်အလှန်ဆော်ကြတာ တစ်နာရီကျော်ကျော်လောက်ကြာပါတယ်။
နှစ်ယောက်လုံးမောတော့ မောပေမယ့် သက်လုံကတော့ကျန်သေးတယ်။
အခုခေတ်ကလူတွေလက်ဖက်လဲမထားဘူး လှဲလဲမချဘူး ထိုးလိုက်ကြတာ တစ်ခွပ်ခွပ်ဘဲ။
နောက်ဆုံးတော့နှစ်ယောက်အလုံးမှာ မြွေပွေးရဲ့သဘာရှိတဲ့ဒူးချက်နဲ့စစ်ကိုင်း ပက်လက်လန်ပြီးရှုံးသွားတာကိုတော့ မှတ်မိနေပါသဗျာ။
အခုလက်ရှိခေတ်မှာ အပြန်အလှန်ကောင်းတဲ့လက်ဝှေ့ပွဲလေးညွှန်းရရင် ၀မ်ချိုင်းနဲ့ရွှေဓူဝံ (ပထမဆုံးတွေ့တဲ့ 12ချီပွဲ)ရယ် ဖိုးကေနဲ့ တွေ့မရှောင်(ပထမပွဲ) လုံးချောနဲ့ဝင်းထွန်း(ပထမပွဲ မျှော်စင်ကျွန်း)တွေကတော့ အကောင်းဆုံးပါ။လက်ဝှေ့အကြောင်းကိုပြောလိုက်တာနဲ့ပြောတာတွေတောင်ဘေးရောက်သွားပြီ၊)
အဲဒီမိုးပျံတံတားနားက ကျုံးနဲ့ကပ်နေတဲ့မြေကွက်လပ်မှာတော့ ပုခက်အကြီးကြီးရှိပါတယ်။
အဲဒီပုခက်ကိုစီးမယ်ဆိုရင် ထိုင်တဲ့လူကတက်ထိုင် အောက်က နှစ်ယောက်က အရှိန်ရအောင်လွှဲပေးရပါတယ်။
ပုခက်ကြီးနားမှာ လျောစီးစရာလဲရှိပါတယ်။ကျနော်အမှတ်မမှားဘူးဆိုရင် အဲဒီအနားမှာရှိတာက ဆင်ရုပ်ကြီးဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။
ဒီအထဲမှာ ဆင်ရုပ် သစ်ကုလားအုပ်ရုပ်ပုံလုပ်ထားတဲ့လျောစီးစရာတွေရှိပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေ့ ပြည်ထောင်စုနေ့များမှာဆိုရင် ဒီဥယျာဉ်ထဲမှာရော ဟိုကျုံးမြောက်ဘက် အာဠလ၀ီတံတားဘက်က စလို့ အနောက်ဘက် ကျုံးနံဘေးမှာရော ပွဲတော်ကျင်းပတတ်ပါတယ်။
ပိတ်ကားထောင်ပြတဲ့ ရုပ်ရှင်နှစ်ကားတွဲက အနောက်ဘက် အာဠလ၀ီတံတားထိပ်မှာတစ်ခု အရှေ့ဘက်မင်္ဂလာတံတားထိပ်မှာတစ်ခု နှစ်နေရာပြလေ့ရှိပါတယ်.
မုန့်ပျစ်စလက်လို လုပ်ထားတဲ့မုန့်ထူထူလေးထဲမှာ နွားနို့် အုန်းသီးခြစ်နဲ့သကြားတွေဆမ်းပေးထားတဲ့မုန့်ပါ။
ပြောမယ်ဗျာ မန်းလေးအကြောင်းတွေးရင် လွမ်းစရာတွေက ပိုပိုများလာသလို့မို့ဆက်ရေးအုံးမယ်ဗျာ။
အမလေးသူ့ ပန်းခြံကြီးထည်းဈာန်ဝင်နေတုန်း အခုအချိန်မှာတော့ မန်းသီတာဥယျာဉ်ဆိုတာကလဲ မရှိတော့ပါဘူးဖျက်သိမ်းလိုက်ပါပြီ။
ဆိုတော့ ရင်ထည်းမှာ ဟာတာတာကြီးဖြစ်သွားတယ် နို့ ဘယ်ရောက်သွားတာတုန်း ကောင်စီရုံးဖြစ်သွားတာလား
မန္တလေးကို အလည်ပတ်သဘောနဲ့ တစ်ခါမှတော့မရောက်ဘူးပါဘူး ပတေလေးအရွယ်တုန်းကတော့ ခရီးတစ်ခုသွားရင်း ရထားနှင့်ဖြတ်သွားဘူးတယ်
စစ်ကိုင်းတောင်တန်းကြီးရဲ့ ညဘက်မီးအလှတွေရယ် လပ်ကီးဟော်တယ်အမြင့်ကြီးရယ် ကြာခဲ့ပါပြီ
လမ်းကြုံရင်တော့ဝင်လည်ကြည့်ပါဦးမယ် ဘယ်ဘုန်းကြီးကျောင်းဟင်းကောင်းသတုန်းဗျ ဟီးး
ကျေးဇူးဘဲ ကိုပေါက်။ မန်းသီတာဥယျဉ်ကြီးကတော့ တကယ်အမှတ်ရစရာ တွေပါဗျာ။ ခက်တာက နောက်ပိုင်းမှာ မန်းတလေးသားမဟုတ်တဲ့။ ဒီမြို့တော်ဝန်တွေ ဘာတွေပြောင်းလာတော့။ ဒီမန်းသီတာဥယျဉ်ကြီးဆိုတဲ့ မန်းတလေးသားတွေရဲ့ အသဲနှလုံးတွေကို ရိုက်ချိုးပစ်ခဲ့ကြတာဗျာ။ ဘာမှကို မကျန်တော့ဘူး။
ဒါနဲ့ ကိုပေါက် မိုးပျံတံတား ဆောက်ထားတာက တမာပင်တွေပေါ်မှာလား။ ကျွန်တော်မှတ်မိတာတော့ ထနောင်းပင်တွေပေါ်မှာလားလို့။ နောက် မန်းသီတာဝင်ဝင်ချင်းနားမှာ ၀င်ကမာကြီး ရှိတယ်။ မှတ်မိတယ် ငယ်ငယ်တုန်းက မထွက်တတ်တော့ ဟို အပင်တွေအောက်က တိုးပြီး ထွက်ခဲ့တာ။
နောက် မန်းသီတာက ညပိုင်း စည်ဘီယာဆိုင်ဖွင့်လိုက်သေးတယ်။ အဲဒါတော့မှတ်မိတယ်။ မီးသီးလုံးလေးတွေနဲ့ မန်းသီတာဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကြီးအောက်မှာ စည်ဘီယာ ဆိုပြီး ရေးထားတာ။ အဲဒီက စပြီး စည်ဘီယာနဲ့ ရင်းနှီးလာတာဗျာ။
စကားအတင်းစပ်ပြောရရင်.. ဟိုတလောက အမေရိကန်နဲ့ဗမာ ထိုးကြတာမှာ ဘယ်သူနိုင်သွားသလဲလို့..။
(4)မြန်မာတစ်ပွဲနိုင် သုံးပွဲသရေပါ သတင်းစာဘဲဖတ်ရပါသေးတယ် ခွေကတော့ နောက်ခြောက်လလောက်မှာမှ ထွက်မှာတဲ့.
အာပုံကို အာရုံပြုလို့ မေရုနဲ့စုတ်တံချည် ဆိုတဲ့သီချင်းကို ကြာဖူးပါတယ်။ ဆရာပေါက်ဆက်ပေးပါအုံး။
အာကာကို လွှာပုံပြုလို့ မေရုကိုတဲ့ စုတ်တံချီ မဟုတ်လား..
အဓိပါယ်တော့ သိပ်နားမလည်ဘူးဗျ။ အင်မတိအင်မတန်ချဲ့ကားစွမ်းဆောင်ရေးတယ် ဆိုလိုချင်တာလို့ ထင်တာပါပဲ..။
အာကာ ဆိုတာက ကောင်းကင်..။
လွှာပုံဆိုတာက … ရေးနိုင်တဲ့တခုခုထင်ပါတယ်..။
မေရုကိုတော့ မြင့်မိုရ်တောင်ကို တင်စားရေးလေ့ရှိတယ်၊ မေရုမြင့်မိုရ်တဲ့..။
ကောင်းကင်ကြီးမှာ မြင့်မိုရ်တောင်လောက် စုတ်နဲ့ရေးမယ်ဆိုတဲ့ အဓိပါယ်ပေါက်မယ်ထင်တယ်..။
ကျားဘညိမ်းရဲ့သား ရွှေအမြုတေကပေါင်ချိန်လာသွားတုံး အခုစကား စပ်မပြောလိုက်ရတာ..နာသဗျာ…။ ယူအက်စ်မှာ ဗမာ့လက်ဝှေ့ ပွဲသွင်းချင်လို့လေ..။
၂ခုမဟုတ်တာတော့ သေချာတယ်..။ ကိုပေါက်ကယ်မှ ရတော့မယ်ထင်တယ်..။
အာပုံဆိုတာက က ကိုဘခွေးရဲ့ဒါန်ပေါက်နဲ့အတူတူပါဘဲနော်။
မန္တလေး ဈေးချိုနား က ညဈေးရှောက်ဝယ်ရတာလေးလဲသတိရတယ် ညဈေးနဲ့ ထမင်းဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးတွေအကြောင်းလဲရေးပေးပါဦး…။
မန္တလေးညဈေးတန်းအကြောင်းက ရေးမယ်ဆိုရင် တပုဒ်သတ်သတ်လောက်ဖြစ်သွားမှာပါ။